News 18 Nepal || नयाँ भेरिएन्टको कोरोना देखिएसँगै डा. अनुप सुवेदीको चेतावनी
काठमाडौं । पछिल्लो पटक कोभिड-१९ डर लाग्दो तवरले फैलिने अवस्था आएको डा. अनुप सुवेदीले बताएका छन् । डाक्टर सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत यस पटकको कोभिड उपचार गर्न कठिन हुने समेत चेतावनी दिएका छन् । ट्वीटर थ्रेडमा उनले यस पटक मृत्युदर बढी देखिने समेत बताएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण तीन हजार ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
‘यस पटकको उपचारमा कोभिड लागेर कोही सिकिस्त भएमा अघिल्लो उपचारमा भन्दा बढी कठिन हुने, मृत्युदर बढी देखिने सम्भावना ठूलो छ,’ उनले भनेका छन् । उनले पछिल्लो पटकको लहरमा मृत्युदर बढ्न सक्ने सम्भावनाका केही कारण समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
डा. सुवेदीले प्रस्तुत गरेका कारणहरु यसप्रकार छन्;
नयाँ भेरिएन्टहरूको संक्रमणशीलता मात्र हैन, मृत्युदर नै पहिलेको भन्दा बढी छ । गत उभारको बेला समुदाय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्यन्त धेरै अनावश्यक एन्टिबायोटिकको प्रयोग भएकाले विगत केही महिनामा धेरै खालका एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट (धेरैथरी एन्टिबायोटिकले नमर्ने खालका) ब्याक्टेरिया स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन् । त्यसले गर्दा कोभिडले बढी सिकिस्त बनाएका व्यक्तिमा देखिने ब्याक्टेरियल निमोनियालाई नेपालमा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिकले उपचार गर्न अत्यन्त कठिन हुन थालेको छ ।
पहिलेको उभार (अवैज्ञानिक) लामो लकडाउनको केही महिनापछि मात्र आएको थियो । एउटा अप्रत्यक्ष फाइदा के भएको थियो भने हावाको प्रदूषण एकदम न्यून भएको थियो, जसले गर्दा दम र फोक्सोका अन्य दीर्घरोगी र अरूको पनि स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको थियो । त्यसैले अघिल्लो उभारमा धेरैलाई कोभिड लाग्दा अरुबेलाभन्दा फोक्सो स्वस्थ अवस्थामा रहेको बेला लागेको थियो, र त्यसले रोग थेग्न अपेक्षाकृत सजिलो भएको थियो होला ।
अहिले स्थिति उल्टो छ । ऐतिहासिक वायु प्रदूषणले सबैको श्वासप्रश्वास प्रणालीको स्वास्थ्य बिग्रेको छ, अस्पतालमा श्वासप्रश्वासका समस्या लिएर आउनेको चाप निकै बढेको छ । श्वास प्रश्वास प्रणाली अस्वस्थ भएको बेला कोभिड पनि लागे दोहोरो समस्याको मार पर्ने देखिन्छ । कोभिड र प्रदूषणबाट पनि बच्न सर्जिकल मास्क हैन, एन-९५ मास्क नै लगाउनुपर्छ ।